“အီရတ်နိုင်ငံက လမ်းစုံမှာရောက်ရှိနေခြင်း” | ESD | Burmese
December 5, 2019 nitin Commentry
သောတရှင်များခင်ဗျား၊ ဒီကနေ့သတင်းဝေဖန်ချက်အခန်းကဏ္ဍမှာ အနောက်အာရှဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်လေ့လာသူ ဆောင်းပါးရှင် Dr. Mohd. Muddassir Quamar ဝေဖန်ရေးသားပေးပို့ထားတဲ့ “အီရတ်နိုင်ငံက လမ်းစုံမှာရောက်ရှိနေခြင်း” အကြောင်း သတင်းဆောင်းပါးကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမဲ့အတိုင်း တင်ပြအစီအရင်ခံပါရစေ။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကျော်ကတည်းက အီရတ်နိုင်ငံမှာ လူငယ်တွေဟာ အဂတိလိုက်စားမှု၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရမှုနဲ့ အီရန်နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့က ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးတွေမှာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေကြဒါကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြလျှက်ရှိကြပါတယ်။ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေက ပိုမိုကြီးမားတဲ့အရပ်သား နာခံလိုက်နာရေး ဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး၊ Najaf ၊ Karbala ၊ Basra နဲ့ Baghdad မြို့တွေအပါအဝင် အဓိကမြို့တွေအားလုံးတို့မှာ ဆန္ဒပြလျှက်ရှိနေကြပါတယ်။ သတင်းများအရ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ Iranian Revolutionary Guards Corps ရဲ့ သစ္စာစောင့်ဖြစ်တဲ့ Popular Mobilisation Forces နဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ ကြေးစားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အရေးယူမှုကြောင့် လူပေါင်း (၄၀၀) ကျော် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့သောကြာနေ့က ဩဇာအာဏာရှိတဲ့ ရှီယာဘာသာရေးဘုန်းကြီး Ayatollah Ali al-Sistani က ပါလီမန်လွှတ်တော်အား ဝန်ကြီးရဲ့အစိုးရကို ထောက်ခံမှုကို ရုပ်သိမ်းဘို့အတွက် စဉ်းစားပါရန် ပြောကြားပြီးတဲ့နောက် ဝန်ကြီးချုပ် Mr Adel Abdul-Mahdi ဟာ ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ နှစ်ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက် ပါလီမန်လွှတ်တော်က ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ နှုတ်ထွက်လွှာကို လက်ခံအတည်ပြုလိုက်ပြီး သမ္မအား ဝန်ကြီးချုပ်သစ် ရွေးချယ်ဘို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး၊ ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ ဗဟိုအချက်အချာဟာ ယခု Baghdad မြို့မှာရှိတဲ့ Tahrir Square သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားပါတယ်။
စီးပွားရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုတွေဟာ အီရတ်လူငယ်တွေထဲမှာ မခံမရပ်ဖြစ်စေတဲ့ အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းကိစ္စတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အီရတ်နိုင်ငံဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က အမေရိကန်တို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကတည်းက ခွဲထွက်ရေးဝါဒ ရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကို ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပေမဲ့ နိုင်ငံရေးတည်တံ့မှုဟာ ပျောက်ကွယ်နေပါတယ်။ အီရတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာ အဓိကရေနံတင်ပို့ရောင်းချတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာပေမဲ့ စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းတွေ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသေးတယ်။ ပြည်သူတို့ဟာ ယခုလိုဖြစ်ရဒါကို ဘဏ္ဍာငွေတွေအား လွှဲမှားစွာကိုင်တွယ်သုံးစွဲမှုနဲ့ နိုင်ငံရေးလူတန်းစားမှာ အဂတိလိုက်စားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ဖေါ်ပြကြပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလအတွင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ ပါလီမန်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲတွေက အီရတ်နိုင်ငံအတွင်း ခေတ်သစ်တခုရဲ့ ရောင်ခြည်သန်းစေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီး၊ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှု၊ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်မှုနဲ့ ခွဲထွက်ရေးဆိုင်ရာ တင်းမာမှုတွေ အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲတွေက အလွန်အမင်ပြိုကွဲနေတဲ့ ဆန္ဒပေးမှုတွေအား ပေါ်ပေါက်စေခဲ့ပြီး၊ အစိုးရဖွဲ့စည်းဘို့ အချိန်ကြန့်ကြာစေခဲ့ပါတယ်။ အသစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ပါလီမန်လွှတ်တော်အတွက် အစိုးရဖွဲ့စည်းဘို့ အချိန် (၅) လကျော် ကြာညောင်းခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း အာဏာရယူခဲ့တဲ့ Mr Adel Abdul-Mahdi ဟာ ပြည်သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရယူနိုင်ဘို့ ဘာတခုကိုမျှ ထိရောက်စွာ မပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အီရတ်လူငယ်တွေ မခံမရပ်ဖြစ်ကြတဲ့ တခြားအရေးကိစ္စကတော့ အီရန်နိုင်ငံရဲ့ အီရတ်ပြည်တွင်းအရေးကိစ္စတွေမှာ ဝင်ရောက်ရှုပ်ထွေးစေဒါဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ Saddam Hussein ကျဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း အီရန်နိုင်ငံဟာ အီရတ်ပြည်တွင်းရေးမှာ ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ စစ်တပ်များရှိနေခြင်းနဲ့အတူ အဓိကကြိုးကိုင်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Baghdad အစိုးရအပေါ် အမေရိကန်တို့ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကလည်း ထင်ရှားစွာတည်ရှိနေပြီး အာရပ် ပင်လယ်ကွေ့အရပ်ဒေသက ဘုရင်တွေ၊ အထူးသဖြင့် Saudi Arabia နိုင်ငံကလည်း Baghdad မြို့မှာ အမေရိကန်တို့ရှိနေခြင်းကို တိုးမြင့်ဘို့ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ အီရတ်လူမျိုးတွေရဲ့ အမြင်မှာ အမေရိကန်နှင့် အီရန် နှစ်နိုင်ငံစလုံးတို့ဟာ Baghdad အစိုးရမှာ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အာဏာတွေကို တားဆီးနေကြတယ်လို့ ယူဆကြတဲ့အတွက် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေက ဒီနှစ်နိုင်ငံစလုံးတို့ကို ဦးတည်လျှက်ရှိနေပါတယ်။
အီရတ်နိုင်ငံမှာ ကြီးမားတဲ့ရေနံသိုက်တွေရှိနေပြီး၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးမားဆုံး ရေနံတင်ပို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်း အီရတ်နိုင်ငံထံမှ ရေနံ မှာယူတင်သွင်းနေကာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကစပြီး Saudi Arabia နိုင်ငံကို ဒုတိယနေရာသို့ တွန်းပို့လိုက်ပါတယ်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်များအတွင်းမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အီရတ်နိုင်ငံထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း ၂၂.၃ ဘီလီယံတန်ဘိုးရှိတဲ့ ရေနံတွေ ဝယ်ယူခဲ့ပြီး အဲဒီပမာဏက အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ စုစုပေါင်း ရေနံတင်သွင်းမှုရဲ့ ၁၃% ဖြစ်ပါတယ်။ New Delhi အစိုးရအဖို့ အီရတ်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို သတိကြီးစွာနဲ့ စောင့်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အီရတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဆန္ဒပြကြသူတွေနဲ့ အေးချမ်းစွာ သဘောတူညီမှုတခုရရှိအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းနဲ့ စုပေါင်းတာဝန်ယူဘို့ ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ဟာ ဒီအရေးကိစ္စကို ထပ်လောင်းရှုပ်ထွေးသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်အခါမှာ အီရတ်နိုင်ငံဟာ လမ်းစုံလမ်းခွပေါ် ကျရောက်နေပြီး၊ ၎င်းရဲ့အနာဂါတ်မြေပုံကို ဆုံးဖြတ်ဘို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ အီရတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာ ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေဟာ ပိုမိုကြီးမားတဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသအပေါ် ဧကန်မုချ အကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယဟာ အီရတ်အစိုးရက သူတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို အာရုံပြုပြီး အဲဒီအတိဒုက္ခကြုံတွေ့နေရတဲ့ နိုင်ငံအတွင်းမှာ အေးချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးတွေ ပြန်လည်ရှင်သန်လာဘို့ မှန်ကန်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေ လှမ်းလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေပါတယ် စသည်ဖြင့် ဆောင်းပါးရှင် Dr. Mohd. Muddassir Quamar ဝေဖန်ရေးသားထားတာကို နိဂုံးချုပ် အစီအရင်ခံ တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား။